theZOMI: [MoemakaDaily] 26th April - MoeMaKa Daily
[MoemakaDaily] 26th April - MoeMaKa Daily
ကျနော် အဖြေရှာနေတာပါ ...
ကျနော် အဖြေရှာနေတာ ...
ကျနော့်ကို အမေမွေးတဲ့ ၁၉၆၂ ခုနှစ်ကစခဲ့ ...
မွေးကတည်းက ကျနော် ငိုတယ်
တကသ အဆောက်အဦကြီး မိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခံရတယ်
ကိုကိုးကျွန်းကို နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ပို့တယ်
တရုတ် - ဗမာ အရေးအခင်း
ဆန် ရှားပါးမှု ...
အာ ... အဖြေရှာပါတယ်ဆိုမှ ပြဿနာပဲ
အဖြေရှာပါတယ်ဆိုမှ ပြဿနာ တထွေးကြီးနဲ့ ထိပ်တိုက်တိုးရ
အဲဒီ ပြဿနာတွေကို ဘယ်လို ခဲဖျက်နဲ့ ဖျက်ပစ်ရမလဲ မေမေ
ကျနော် အဖြေရှာနေတာ ပြဿနာတွေသာ တွေ့တွေ့နေရ
ပြဿနာတွေကလည်း ပြဿနာပြီး ပြဿနာ
ပြဿနာတွေက အသစ်ပြီး အသစ်
၁၉၇၄၊ ၇၅ ... ပြဿနာတွေ
ဦးသန့် ... ကျွန်းဆွယ် ... သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း ... ဂျွန် - ၆
ဘုန်းမော် ... စိုးနိုင်
" နောင်ကို ဆူဆူပူပူလုပ်ရင်
စစ်တပ်ဟာ မိုးပေါ်ထောင်မပစ်ဘူး ... "
ဂျွန် - ၂၁
အာ ... ကျနော် အဖြေရှာနေတာပါဆို
"သမဂ္ဂ အဆောက်အဦကြီးကို ပျော်ပျော်ပါးပါး အုတ်မြစ်ချ ..."
ရင်ဘတ်မှာ မောင်းပြန်သေနတ်ကျည်ဆံရာ အပေါက်ကြီးတွေ
အဖြေမတွေ့ဘဲ ... ပြဿနာတွေချည်း တွေ့
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်
ဒီပဲယင်း ... လူအစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ပွဲ
စု - လွှတ် - တွေ့
၂၀၀၇ - စက်တာဘာ ... သံဃာထု
၂၀၀၈ စစ်အခြေခံ ဥပဒေ
၂၀၁၀ - အဓမ္မရွေးကောက်ပွဲ
ဂုရုရေ ... မင်းပြောသလို
ပြဿနာတွေ တပြုံ တထွေးကြီး ...။
"၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကို မစွန့်လွှတ်ဘူး
ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့မကျတော့ဘူး "
၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်မယ် ... ၀င်တယ် ..."
( ဒုက္ခ ဘယ်တုန်းက လူထုက တောင်းဆိုလိုက်သလဲ မသိဘူး )
အဲဒါ .... မင်း သိလိုက် ... ကြားလိုက်သလားဟ ...။
ဘုရား ... တရား ... သံဃာ
ဘုန်းကြီးကို မီးလောင်ဗုံးနဲ့ ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းရတယ်လို့ ...
သမတကြီး ... သမတကြီး
အင်းလေကန် ခမ်းခြောက်သွားတာ ဘာအရေးလဲ
လယ်သမားတွေ ထမင်းငတ်တာ ဘာအရေးလဲ
ကျေးဇူးရှင် လယ်သမားကို သေနတ်နဲ့ ပစ်တာ ဘာအရေးလဲ
ကျနော် ပြဿနာ ရှာနေတာ
အဲလေ ... ကျနော် အဖြေရှာနေတာပါ ...
အဟင့် ... ဟင့်
"သမတ ဖြစ်ချင်တယ် ... သမတ လုပ်ချင်တယ် "
"ဖန်လ်ခွက်ထဲ ရေတ၀က်ရှိနေရင် ရှိတယ်လို့ လက်ခံရမှာပဲ "
ဟာ ... ဟဲ့ကောင် ငတုံးရ
အဲဒါ .... ရေမဟုတ်ဘူးဟ
အပြစ်မဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ ခေတ်အဆက်ဆက် ကျခဲ့ရတဲ့ မျက်ရည်တွေ ဟ
အရေးတော်ပုံနဲ့ အရေးခင်းတွေမှာ ကျခဲ့ရတဲ့ ပြည်သူ့သွေးကို ပေါင်းခံထားတဲ့ အရည်ဟ
သင်္ချိုင်းကုန်းက အမေရေ ...
ထပြီး ... ဆုံးမလိုက်ပါတော့ဗျာ ...။ ။
+ ၀န်ခံချက်။ ။ ဒီစာ ကဗျာလို့ မခံစားကြပါနဲ့ ဗျာ ...
No comments: Labels: ကမာပုလဲ
မေတ္တာဖျန်းမှလန်းဆန်းမဲ့ မိဘမဲ့ကလေးလေးတွေနဲ့ 
မိဘရှိပြီး အတူနေခွင့်မရတဲ့ ကလေးလေးတွေအတွက်
မေတ္တာမျှဝေပေမဲ့ ကိုယ်ကိုတိုင် နွေးထွေး ဖော်ရွေမှုကမ်းလက်ကို မျှော်လင့်ခဲ့မိပါတယ် ...။
အထီးကျန်နေသူများကို အဖော်ပြုဖုို့ ပြောခဲ့ပေမယ့်လည်း
ကုိုယ်ကုိုတုိုင် ခြောက်သွေ့မှုများနဲ့ အဖော်မဲ့ခဲ့ရပါတယ် ......။
ဘ၀ကုို စုန်မျှောအရှုံးပေးချင်သူတွေ ကူညီနုိုင်ဖုို့ အားပေးခဲ့ပေမယ့်
ကုိုယ်ကုိုတုိုင် ပင်ပန်းလေးလံ ထုိုင်းမှိုင်းမှုတွေနဲ့အတူ
မနက်ဖြန်နေ့ရက်ကုို ရင်မဆုိုင်ချင်လောက်အောင် ကျိုးပဲ့ ချိနဲ့နေခဲ့ရပါတယ် ...။
ပင်ပန်းခြင်းတွေနဲ့ညည်းတွားနေကြသူများကို လှိုင်းကြီးလှေအောက်ပါလို့ 
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေး အားပေးနှစ်သိပ့်စကားလေး ပြောခဲ့ပေမယ့်လည်း
ဘဝလောကဓံကြားက ကိုယ်တိုင်လှေငယ်လေးက မြှုပ်လုမြှုပ်ခင်ပါဘဲ ...။
ကိုယ်တိုင်က အမှောင်ထဲ အတွင်းကြေကြေခဲ့သူပါ
ဘယ်သူသိနုိုင်မှာတဲ့ ရေခြား မြေခြားဘဝ (oversea life) လေ ...။
No comments: Labels: ဂေါ်ရှယ်
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ ဦးကျော်သူသည် မြန်မာပြည်အဝှမ်းနယ်မြို့များရှိ ပရဟိတအသင်းအဖွဲ့ များ၊ ပရဟိတစိတ်ဓါတ်များ ပိုမိုတိုးတက်လာစေရန်နှင့် ပရဟိတအသင်းအဖွဲ့အချင်းချင်း စနစ်တကျနှင့် ပိုမို၍စည်း လုံးမှုရှိစေရန် ဒေသတစ်ခုတွင် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ကျရောက်လာပါက အသင်းအဖွဲ့အချင်းချင်း ဆက်သွယ် ကူညီမှုများ ပေးနိုင်ရန်အတွက်ရည်ရွယ်၍ ပရဟိတဟောပြောပွဲများ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းနှင့် ရှမ်းပြည် နယ်ရှိ မြို့အတော်များများတွင် ဟောပြောပွဲများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ယခင်လအတွင်း၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သော လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခများကြောင့် လူစုလူဝေးများဖြစ်စေမည့် ဟောပြောပွဲများအား ခေတ္တရပ်နားထားခဲ့ရာ ယခု အခြေအနေများ ကောင်းမွန် ငြိမ်သက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်သဖြင့် လူမှုရေးပရဟိတ ဟောပြောပွဲများအား ပြန်လည်စတင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
၂ဝ.၄.၂ဝ၁၃ ရက်နေ့တွင် ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) ကျိုင်းတုံမြို့ရှိ မဟာအနှစ်၏ ရင်သွေး "နှလုံးလှ ပိုင်ရှင်များ" နာရေးကူညီမှုအသင်း၏ ရုံးဖွင့်ပွဲနှင့် လူမှုရေးပရဟိတဟောပြောပွဲအား ကျိုင်းတုံမြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ် ခဲ့ကာ ယင်းနေ့ ညနေပိုင်းတွင် "နှလုံးလှပိုင်ရှင်များ" နာရေးကူညီမှုအသင်းရုံးခန်းအား နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) ဦးကျော်သူမှ ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီး ည (၈းဝဝ) နာရီအချိန်တွင် ဟောပြောပွဲအား ကျင်းပခဲ့သည်။ ထိုသို့ ဟောပြောခဲ့ရာတွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ဦးကျော်သူမှ "ဗြဟ္မစိုရ်ခြေလှမ်းများ" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဟောပြော ပေးခဲ့ပြီးနောက် ကိုအလင်းဆက်(IR)မှ "ပဉ္စမမဏ္ဍိုင်၏စိန်ခေါ်မှုများ" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဟောပြောပေးခဲ့သည်။ ၄င်းဟော ပြောပွဲသို့ မြို့ခံပရိသတ်များနှင့် လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများမှလာရောက် အားပေးခဲ့ကြသည်။ "နှလုံးလှပိုင်ရှင်များ" နာရေးကူညီမှုအသင်းသည် လူငယ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး မဟာအနှစ် ဗုဒ္ဓဘာသာတရားပွဲ များ ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့၏ ရင်သွေးငယ်များလည်းဖြစ်သည်။ "နှလုံးလှပိုင်ရှင်များ" နာရေးကူညီမှုအသင်း၏ ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူအောင် ဦးဆောင်၍ တက်ကြွစွာလှုပ်ရှားနေသော လူငယ်အဖွဲ့အား မြင်တွေ့ရသည်မှာ ၄င်းတို့၏ အသင်း အတွက် အားတက်စရာပင် ဖြစ်တော့သည်။ ထို "နှလုံးလှပိုင်ရှင်များ" နာရေးကူညီမှုအသင်း၏ ရုံးဖွင့်ပွဲတွင် တိုက် ဆိုင်စွာဖြင့် အလှူရှင်များမှ လှူဒါန်းသော နာရေးနိဗ္ဗာန်ယာဉ် (၂) စီးအား လက်ခံရရှိခဲ့လေသည်။ နောက်တနေ့ နံနက်တွင် ကျိုင်းတုံမြို့ရှိ ကျိုင်းတုံစော်ဘွား၏ ဂူသင်္ချိုင်းဗိမာန်အား သွားရောက်လေ့လာခဲ့ကာ ကျိုင်းတုံစော်ဘွား၏ နောက်ဆုံးမျိုးဆက်ဖြစ်သူနှင့် တွေ့ဆုံခွင့်ရရှိခဲ့ပြီး စော်ဘွားများ၏ သင်္ချိုင်းဂူဗိမာန် (၉) ခုအား ဂါရဝပြုကာ ပြုခဲ့သမျှ သော ကောင်းမှုကုသိုလ်တို့အား မေတ္တာပို့သ အမျှပေးဝေခဲ့ကြသည်။
၂၁.၄.၂ဝ၁၃ ရက်နေ့တွင် တာချီလိတ်မြို့သို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြပြီး "မဇ္ဇျိမ" လူမှုကူညီရေးအသင်း ဥက္ကဌ ဦးတင့် ဆွေ၏ ဦးဆောင်စီစဉ်မှုဖြင့် ယင်းနေ့ ည (၈းဝဝ) နာရီအချိန်တွင် ဟုတ်တက် ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားကျောင်းတွင် လူမှုရေးပရဟိတ ဟောပြောပွဲကျင်းပခဲ့သည်။ ထိုဟောပြောပွဲတွင်လည်း ကောင်းသောအကြောင်းတရားကြောင့် ကောင်းသောအကျိုးတရား ဖြစ်ထွန်းသည်ဟုပင် ဆိုရလေမလားမသိ။ "မဇ္ဇျိမ" လူမှုကူညီရေးအသင်းသို့ အများ ပြည်သူ အလှူရှင်များမှ လှူဒါန်းခဲ့သောအလှူငွေများနှင့် မြို့နေပြည်သူလူထုတို့၏ အင်တိုက်အားတိုက် အားပေးခြင်း ခံယူရရှိခဲ့လေသည်။ ၂၂.၄.၂ဝ၁၃ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် တာချီလိတ်မြို့၏ သုဿန်သို့ သွားရောက်လေ့လာခဲ့ပြီး နေ့လည် (၁၂းဝဝ) နာရီအချိန်တွင် တာချီလိတ်မြို့ရှိ "မဇ္ဇျိမ" လူမှုကူညီရေးအသင်းနှင့် မြို့ခံပရဟိတအဖွဲ့များ၊ ထိုင်း နိုင်ငံ မယ်ဆိုင်မြို့ရှိ လူမှုဂရုဏာအသင်း(မယ်ဆိုင်) အစရှိသည့် လူမှုရေးအဖွဲ့များတို့အား ဇန်းမွန်အာခါဟိုတယ်တွင် တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီး ပရဟိတအဖွဲ့များမှ သိလိုသောအချက်များအား မေးမြန်းခဲ့ရာ ဦးကျော်သူမှ ပြန်လည်ဖြေကြား၍ အမှတ်တရပစ္စည်းများ ပေးအပ်ခဲ့ကြသည်။
ယခုကဲ့သို့ အများပြည်သူတို့အတွက် ပရဟိတဟောပြောပွဲများ အယူသီးမှုပပျောက်ရေးနှင့် အသိပညာပေး ဟောပြောပွဲများပြုလုပ်ပေးခဲ့သော ကျွန်တော်တို့၏ ပေးဆပ်မှုအကြောင်းများကြောင့် ယခုခရီးစဉ်တွင် ကျိုင်းတုံမြို့ရှိ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၂၃) နှစ်က ပျံလွန်တော်မှုခဲ့ပြီး ယနေ့တိုင် မပုပ်မသိုး၊ မပျက်ယွင်းဘဲ အကောင်းပကတိ အလား သက်တော် (၇၆) နှစ်ရှိ ဆရာတော်ဦးသာဂရ၏ ရုပ်ကလာပ်တော်အား ဖူးမျှော်ခွင့် ရရှိခဲ့သလို ကျိုင်းတုံ စော်ဘွားများ၏ ဂူသင်္ချိုင်းဗိမာန်များအားလည်း လေ့လာဂါရဝပြုခွင့်ရရှိခဲ့သော အကျိုးထူးကိုရရှိခဲ့ကာ ကျိုင်းတုံမြို့ရှိ မဟာအနှစ်၏ရင်သွေး "နှလုံးလှပိုင်ရှင်များ" နာရေးကူညီမှုအသင်း၏ ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူအောင်နှင့် တာချီလိတ်မြို့ရှိ "မဇ္ဇျိမ" လူမှုကူညီရေးအသင်း ဥက္ကဌ ဦးတင့်ဆွေတို့၏ ဗြဟ္မစိုရ်စိတ်ဓါတ်အကြောင်းတို့ကြောင့် မော်တော်ယာဉ်များ၊ အလှူငွေများနှင့် ပြည်သူလူထုတို့၏ ထောက်ခံအားပေးမှု အကျိုးတရားများ ရရှိခဲ့ပါကြောင်းနှင့် "ကိုယ်ပြုသောကံ ပဲ့တင်သံ ကိုယ့်ထံပြန်လာမည်" ဖြစ်ပါကြောင်း ထိုထူးမြတ်လှသည့် ကုသိုလ်ထူး၊ အကျိုးထူးများအား အများပြည်သူ တို့အား မျှဝေလိုက်ရပါတော့သည်။
● ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အဖမ်းခံရပြီးနောက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်အခြေအနေ
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ရုံးက ဇူလိုင်(၂၃) ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စာအရ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဦးတင်ဦးကို ဖမ်းတော့မဲ့ဆဲဆဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်တဲ့အစည်းအဝေးက အောက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများကို ယာယီအရန် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် များအဖြစ် တိုးချဲ့ ပေးခဲ့ပါတယ်.။
၄။ ဦးစိုးသိန်း(မောင်ဝံသ) တို့ဖြစ်ပြီး .. နောက်ထပ်
၆။ ဦးကျော်မင်း (ဗိသုကာ)
၈။ ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းတို့ကို အလုပ်ကော်မတီဝင်များအဖြစ် တာဝန်ပေးခဲ့ပါတယ်..။
နယ်အဖွဲ့ အစည်းများအနေနဲ့ စိတ်တည်တည် ငြိမ်ငြိမ်ထားကာ အစည်းအဝေးများကျင်းပပြီး ခေါင်းဆောင်ကြီးများကို နေအိမ်အကျယ်ချုပ်
ထားတာနဲ့ အခြားခေါင်းဆောင်အများအပြား ဖမ်းဆီးထားတာကိုလည်း ကန့်ကွက်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ မ.၀.တ၊ တ.၀.တ နဲ့ န.၀.တ များထံကို ပို့ဖို့ ညွှန်ကြားလာပါတယ်..။ အဲဒီညွှန်ကြားချက်တွေရဲ့  အောက်ဖက်မှာတော့ "အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကင်း လွတ်ခွင့်အမှတ် န/သ ၀၅၂" ဆိုတာ ပါလာပါတယ်..။
အဓိပါယ်ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကင်းလွတ်ခွင့်မလျှောက်ဘူး. ။အာဏာဖီဆန်တယ် ဆိုပေမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အ ဖမ်းခံရတာနဲ့  တပြိုင်တည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောခဲ့တာကိုဘေးချိတ်ပြီး ကင်းလွတ်ခွင့် လျှောက်လိုက်ပြီ ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့..။
ဇူလိုင်(၂၄) ရက်နေ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ်ရဲ့ ကြေညာချက် အမှတ်(၂၇)မှာတော့ ဒီကိစ္စကို ရှင်းလင်းပါတယ်..။စာပိုဒ် (၅) မှာ အဖွဲ့ ချုပ်တရားဝင်ရပ်တည်ခွင့်ရရှိဖို့ အတွက် နိုင်ငံရေးပါတီများ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှု ကင်းလွတ်ခွင့် လျှောက်ထားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီလို့ပါပါတယ်..။အကြောင်းပြချက်ကတော့ "ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တောင် ဇူလိုင်(၁၉)ရက် နေ့ကအာဇာနည်ကြီးများကို ပြည်သူနဲ့ အတူ ချီတက်အလေးပြု မယ့် အစီအစဉ်ကို သွေးချောင်းစီး မဲ့ အန္တရာယ်ကိုထောက်ပြီး ပယ်ဖျက်ခဲ့တယ်..။ ဒါကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့တာ ဖြစ်ပေမယ့် ပယ်ဖျက်သင့်တာ ပယ်ဖျက်မယ် ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့"
ဒီနောက် အစည်းအဝေးမှာလည်း ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် နဲ့ ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကို တိုးချဲ့ ဖို့သာ ဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီး အဖမ်းခံသွားရတာ
ဖြစ်လို့ ထုတ်ဝေမှု ကင်းလွတ်ခွင့် မှတ်ပုံတင်ကိစ္စကိုဆုံးဖြတ်မသွားနိုင်တော့တာသာ ဖြစ်တယ်..။ဒါကြောင့် ကျန်တဲ့ သူတွေက အဖွဲ့ ချုပ်ရပ်တည်နိုင်ရေး အတွက် ကင်းလွတ်ခွင့်လျှောက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တယ်..။ဒါဟာ အဖွဲ့ ချုပ်အတွက် သိက္ခာမကျပါဘူး..လို့ ဖော်ပြပါတယ်..။
အဖွဲ့ ချုပ်က နောက်ထုတ်တဲ့ ကြေညာချက် ၊ညွှန်ကြားချက် တွေဆိုရင်လည်း နယ်အဖွဲ့ အစည်းတွေ နဲ့  အဖွဲ့ ချုပ်ဝင်လူငယ်တွေ အတွက် မကျေနပ်စရာတွေပါလာပါတယ်..။ဇူလိုင် (၂၉)ရက် နေ့ ထုတ်တဲ့ ညွှန်ကြားချက်မှာတော့ ခေါင်းဆောင်ကြီး နှစ်ဦးနဲ့  ကျန်အဖမ်းခံရသူတွေ လွှတ်ပေးရေး အတွက် မိမိတို့ ကိုးကွယ်ရာအယူဝါဒအလျှောက် ၀တ်ရွတ်စဉ်များ..၊ဆုတောင်းပွဲများ တပတ်တိတိ ဆက်လုပ်ကြပါလို့ ညွှန်ကြားပါတယ်။ ညွှန်ကြားချက်ထဲ မှာ ၁၉၆၀ ခုနှစ်လောက်က ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ်ရေးခဲ့တဲ့ကဗျာတပုဒ်လဲ ထည့် ထားပါသေးတယ်..။
ဒေါသဖြစ်ရွေ့  ပူခြစ်လောင်တောက်
ငါစိတ်ဖောက်သည် ၊မြွေဟောက် ပါးပျဉ်း နှယ်တကား..။
ဒေါသ ပြေခဲ့ ဖူးသည် ရှင့်..။
ပူသည့်ဒေါသ ၊ ထသည့် အမျက်
ထွက်သည့် စိတ်ကြမ်း ၊မနိုင်စွမ်းရွေ့ 
အေးချမ်းမေတ္တာ ၊သုတ်ကို ရှာသော်
ပမာ တောက်ငြီး၊ တောင်တက်မီးကို
မိုးကြီး ညှိမ်းသို့ ၊ ငြိမ်းစေသတည်း။ ။
ဒါဟာ...နိုင်ငံရေး ပါတီကြီး တခုရဲ့  လုပ်ငန်းစဉ်ညွှန်ကြားချက် တဲ့ လား..။အဖွဲ့ ချုပ် ဗဟိုမှာ ဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲ..။ဘယ်လိုလူမျိုးတွေ ခေါင်းထောင်နေတာလဲ..။ခေါင်းဆောင် တွေ ဘယ်လောက်များ အဖမ်းခံကုန်ကြရပြီလဲ..။ဒီအချိန်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ သတင်းတွေ အရ၊ ကိုယ့်မြို့ က ခွါသွားဖို့ ကလည်း အခက်..။ရှောင်ပြေး တာလားလို့  ထင်မှာလည်း စိုးရိမ်ရ..။ကိုယ်မရှိတုံး ရုံးကို ၀င်ရောက် နှောင့်ယှက် တာတို့ ဘာတို့ ဖြစ်မှာကိုလည်းစိုးရ...။ဘာလုပ်လို့  လုပ်ရမှန်းတောင်မသိဘူး...။အိနြေ္ဒ မပျက် နေ့စဉ် ရုံးဖွင့်..။အလံထူ..။ရုံးကို ရောက်လာတဲ့ သူတွေကိုလည်း အခြေအနေစောင့်ကြည့်ဖို့ သာ တွင်တွင် သတိပေးနေရတော့တာပါပဲ...။ကိုယ့် မြို့ ကအာဇာနည်နေ့က ရခဲ့တဲ့ အရသာကလေးတောင် စမြုံ့ပြန်ချိန် မရတော့ဘူး...။
ဇူလိုင်လ ကုန်ခါနီးလာတော့ နည်းနည်း တည်ငြိမ်လာတာမို့မြို့ နယ်စည်းရုံးရေးကော်မတီအစည်းအဝေး ခေါ်ပြီး အခြေအနေ အားလုံးကို ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးကြတယ်..။ဗဟိုက ရသမျှ ညွှန်ကြားချက်နဲ့ သတင်းတွေကို တင်ပြပြီး..ဥက္ကဌ ဦးတင်ဦး နဲ့  အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့ကို ဖမ်းဆီးပြီး နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ထားတာကို ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်ကြောင်းနဲ့ နယ်အသီးသီးမှာ ဖမ်းဆီးထားတဲ့ အဖွဲ့ ချုပ်ဝင်များ၊အခြား ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများကို အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက် များကို ဇူလိုင်(၂၈)နေ့ မှာ ချမှတ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ မ.၀.တ ၊တ.၀.တ နဲ့  န.၀.တ တို့ကို ပို့...။ဗဟိုကို မိတ္တူ ပို့ ..စတာတွေကို လုပ်နိုင် လာပါတယ်..။
ဇူလိုင်လ (၃၀)ရက်မှာ ပဲခူးတိုင်းစည်း ကိုယ်စားလှယ်ဗိုလ်မှူးဟောင်း မောင်အေး..၊ဦးနိုင်ဦး..၊ဒေါက်တာ တင်အေး၊ဦးဇော်မင်း နဲ့  ဦးအောင်စောဦး တို့ ပြည်မြို့ နယ်စုကိုရောက်လာပါတယ်..။မြို့ နယ်စု (၆)မြို့ နယ် အစည်းအဝေး လုပ်ပြီး ဗဟိုအခြေအနေကို ဦးမောင်အေး ရှင်းပြလို့သိရတာက ဇူလိုင်လ(၁၉)ရက်နေ့နံနက် ပိုင်းမှာပဲ ရန်ကုန်မြို့ နယ်အသီးသီးကို ချီတက်ရေး အစီအစဉ်များဖျက်သိမ်းကြောင်း ကို အကြောင်းလဲကြား..။တချို့  နေရာတွေမှာ ၀င်လည်း ထိန်းသိမ်းပေး တာမျိုး တွေလုပ်ကြရတယ်..လို့  သိရပါတယ်..။သူ့ကိုဖမ်းတော့ မှာကို သိလို့  ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဗဟိုအလုပ်အမှု ဆောင်ကိုတိုးချဲ့ သွားတယ်..။နေ့လည်ပိုင်းမှာ အိမ်ရှင်မှ တပါး အားလုံး ထွက်ခိုင်းလို့  ထွက်လာကြတော့လူစုကွဲသွားပြီး နောက်တနေ့  (၂၀)ရက်နေ့မှာ ဒေါ်စုကို ဖမ်းတယ်..။(၂၁)ရက် နေ့ နေ့လည်(၂)နာရီ မှာ ရှိတဲ့ ဦးစီး အဖွဲ့ နဲ့  စည်းဝေးကြပြီး အဖွဲ့ မပျက်ရေး အတွက် ပုံနှိပ်ဥပဒေကို ကင်းလွတ်ခွင့်  လျှောက်သင့်ကြောင်းဆွေးနွေးကြတယ်..။မကျေနပ်သူတွေရှိလို့  ဗဟိုဦးစီး အဖွဲ့  (စီစီ ) အစည်းအဝေးကို ဇူလိုင် (၂၃)မှာထပ်ခေါ်တယ်..။ဗဟို ဦးစီး (စီစီ) (၄၁) ဦးရှိတဲ့ အနက် (၁၁)ဦး အဖမ်းခံထားရလို့  စီစီ (၃၀) ရှိတဲ့အနက် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ (စီစီ) (၂၅) ဦးပဲရှိတော့တယ်..။မဲခွဲရာမှာ ကင်းလွတ်ခွင့်  လျှောက်ဖို့  (၂၁)မဲ ၊ကန့်ကွက်မဲ(၁) မဲ၊ ကြားနေ (၃) မဲနဲ့  အတည်ဖြစ်ပြီး ဦးဘသော်(မောင်သော်က) အမည်နဲ့  ကင်းလွတ်ခွင့်  လျှောက်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်အပြီးမှာ ဆရာ မောင်သော်က အဖမ်းခံ ရလို့  ဦးချစ်ခိုင် အမည် နဲ့  ကင်းလွတ်ခွင့် လျှောက်ထားရတယ်..ဆိုတာတွေ ကို သိရပါတယ်..။ဦးမောင်အေး ပြောပြလို့  ဦးမိုးသူ၊ဒေါ် မြင့်မြင့် ခင်၊ဦးသော်က၊ ဦးစိုးသိမ်း ၊ ဦးထွန်းတင် တို့  အဖမ်းခံရပြီး.။ဦးကိုယု နဲ့  ဦးဝင်းခက် ကို အဆက်မသွယ်မရကြောင်း..၊ရှောင်နေကြကြောင်း..သိရပါတယ်..။ ။
● မြို့ နယ်ပါတီ တွင်း တာဝန်ခွဲဝေရေး ပြသနာ
အဲဒီလို တပြည်လုံး အတိုင်းအတာနဲ့  နိုင်ငံရေးလှိုင်းတံပိုးထန်နေချိန်မှာ ပေါင်းတည်မြို့ နယ်အတွင်းရှိ မြို့ နယ်စည်းရုံးရေး ကော်မတီ(ယာယီ) အဖွဲ့ ဝင် ဦးဖေမြင့်ကနိုင်ငံရေး သုံးသပ်ချက်နဲ့  အလုပ်စာတမ်းတခု တင်ပြလာပါတယ်..။ဒီ စာတမ်းကို (၅.၈.၈၉) နေ့ ကော်မတီ အစည်းအဝေးမှာဆွေးနွေးကြပါတယ်..။
သူ့ စာတမ်းကို သူကိုယ်တိုင် ရှင်းလင်းဖတ်ကြားပါတယ်..။စာပိုဒ် (၁၅)ပိုဒ်ပါပြီး အပိုဒ်(၁)က (၃) အထိ နိဒါန်းပိုင်း...။အပိုဒ် (၄) နဲ့  (၅)က ပေါင်းတည်မြို့ နယ် စည်းရုံးရေးကော်မတီ ရဲ့  လက်ရှိအခြေအနေ..။အပိုဒ်(၆)(၇)(၈)(၉)(၁၀)(၁၁)(၁၂) နဲ့  (၁၃) တို့က လက်ရှိအခြေအနေ အပေါ်သုံးသပ်ချက်..။အပိုဒ်(၁၄)နဲ့  (၁၅)ကလက်ငင်း လုပ်သင့်သည့်  လုပ်ငန်းများလို့  ပါရှိပါတယ်..။
အတိုချုပ်ကတော့ ဒီမြို့ နယ် စည်းကော်မတီမှာ ကော်မတီဝင်(၂၃)ဦး ရှိပေမယ့် (၂၂) ဦးနဲ့  လှုပ်ရှားနေရာမှာ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာ အတွေ့ အကြုံ ရှိသူတွေ..။နိုင်ငံရေးမှာ အတွေ့ အကြုံ ရှိသူတွေ ပါတာမို့အဖွဲ့ လိုက် အားကောင်းမှု ရှိတယ်..။ဒါပေမယ့် အားလုံး စည်းရုံးရေးကော်မတီဝင်တွေချည်း ဖြစ်နေပြီးသီးသန့် တာဝန်ခွဲခြားမထားပဲ တစ်ဦးချင်း တာဝန်ထမ်းရွက်မှု သတ်သတ်မှတ်မှတ် မရှိလို့ အားနဲတယ်..။ဒါ့ ကြောင့်  တဦးချင်း တာဝန်သတ်သတ် မှတ် မှတ် ရှိတဲ့ အမှုဆောင်အဖွဲ့ ဖွဲ့ သင့်တယ်..ဆိုတဲ့သဘောပါဘဲ...။သူ့ ရဲ့  သုံးသပ်ချက် စာတမ်းက တော်တော် ပြည့်စုံပါတယ်..။တော်တော်လည်း ကောင်းပါတယ်..။လုပ်ငန်းစဉ် အနေနဲ့  တာဝန်တိတိကျကျ တစ်ဦးစီ ပေးရေး ဆိုတာလဲ ကောင်းတာပါဘဲ..။ ဒါပေမယ့် မြို့ နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ် စဖွဲ့စဉ်ကတည်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဥက္ကဌ ရူး မရူးကြနဲ့  ဆိုလို့ ဥက္ကဌ အတွင်းရေးမှူး တောင် မထားခဲ့ပါဘူး..။ဒါဟာ ဗဟိုညွှန်ကြားချက်အတိုင်းပါ..။ဒါပေမယ့် မြို့ နယ်အတော်များများမှာ ဗဟိုက ဥက္ကဌအတွင်းရေးမှူးရယ်လို့ မဖွဲ့ ပါနဲ့  ဦး...လို့ဆိုထားတဲ့ ကြားထဲကပဲ..။ဗဟိုရဲ့  ဖွဲ့ စည်းပုံ အတိုင်း နာယကတွေ၊ ဥက္ကဌတွေ၊ဒု ဥက္ကဌ တွေ နဲ့  ဖွဲ့ ကြပါတယ်..။ကျနော် တို့  မြို့ သာ စည်းရုံးရေးကော်မတီ ဘဲ ရှိပြီး ဥက္ကဌ
အတွင်းရေးမှူး ဆိုတာတွေ မရှိသေးတာပါ..။မ.၀.တ ကနေပြီး ခေါင်းဆောင် တယောက် အမည်ပေးပါဆိုတော့ ကျနော့် နံမယ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကျနော်က ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကတည်းက နံမယ် ထွက်ပြီးသားဖြစ်တာရယ်..။မ.၀.တ ဥက္ကဌ နဲ့ လဲအတော်များများ အလုပ်တွဲလုပ်ခဲ့ဖူးတော့ ကျနော့်နံမယ်တော့ပေါ်ချင်ပေါ်ပစေတော့ လို့  သဘောထားပါတယ်..။ကျန်တဲ့ သူတွေကိုတော့ အချိန်မတိုင်မီ အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းများထံမှာ စာရင်းဝင်သွားမှာကို လည်း မလိုလားလို့ အားလုံးတန်းတူထားပြီး လုပ်နေတာပါ..။
ဒါပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ အာဇာနည်နေ့လို ကိစ္စမျိုးကျတော့အာဏာပိုင်အဖွဲ့ အစည်းနဲ့  ဆက်သွယ်တဲ့ လုပ်ငန်း ၊အစည်းအဝေးတက်တာ..၊ဆွေးနွေးတာ..။အဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ညွှန်ကြားတာ၊အားလုံးကို ကျနော်ကပဲလုပ်သွားတော့ မြို့ နယ်အဖွဲ့ အစည်းရဲ့  ခေါင်းဆောင်မှုကိုကျနော်တဦးတည်းက လက်ဝါးကြီးအုပ် ချုပ်ကိုင်ထားသလို ဖြစ်နေတယ်..။ကျနော်က ပြသနာပေါ်ရင် ကျနော်ပဲ ရှေ့ ကခေါင်းခံမယ်..လို့အနာခံစိတ်ထားတယ် ဆိုပေမယ့် လက်တွေ့ သဘောက ကျနော်က ခေါင်းဆောင်မှုကိုချုပ်ကိုင်ထားတယ်..။ကျန်တဲ့သူတွေကို တာဝန်ယူတတ်အောင်..။သူ့အတိုင်းအတာအလျှောက် တာဝန်ခွဲဝေမှု နဲနေတဲ့သဘော က လက်တွေ့ မှာထင်ရှားနေတယ်..။
ဒါ ကြောင့် ဦးဖေမြင့် ရဲ့  စာတမ်းက မှန်မှန်ကန်ကန်သုံးသပ်ထားတယ် လို့  လက်ခံနိုင်ပါတယ်..။ဒါပေမယ့် ဗဟိုက ခုထိ ဖွဲ့စည်းပုံ မပေးသေးပါ..။နောက်တချက်က ဗဟိုမှာ ဥက္ကဌနဲ့  အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးတို့ကို အကျယ်ချုပ်ချထားပြီး ကျန်တဲ့ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်တော်တော်များများ အဖမ်းခံနေရတဲ့အခုလိုလှုပ်လှုပ် ရှားရှား အချိန်မျိုး မှာမှ ကျနော်တို့က အမှုဆောင်ထဖွဲ့ပြီး ဘယ်သူက ဘာတာဝန်ရယ်လို့ သတ်မှတ်လိုက်ရင် သူခိုး..သူခိုး အော်နေတုံး ခြေထဆေးလိုက်သလိုဖြစ်နေမလား..။အခု အတိုင်းက ဖမ်းချင်ရင်ကျနော် တယောက်ထဲကိုပဲ ဖမ်းနိုင်မယ်..။ကျန်တဲ့အဖွဲ့ ဝင်တွေကတော့ဘယ်သူက ဘာတာဝန်ရယ်လို့ အတိအကျ မရှိထားလို့ အားလုံး ဖမ်းချင်ရင် ဖမ်း..။အရေးကြီး တာဝန်ယူထားသူရယ်လို့  သီးသန့်မရှိတော့လူရွေးဖမ်းဖို့  မလွယ်ဘူး..။ကျနော်တို့က အမှုဆောင်ဖွဲ့လိုက်မယ်..။တာဝန်ခွဲဝေလိုက်မယ် ဆိုရင် လူရွေးသာသွားမယ် ဆိုတဲ့ အချက်တွေကို ထည့်စဉ်းစားသင့်တယ်..လို့သုံးသပ်ကြပါတယ်..။အယူအဆ အမျိုးမျိုး နဲ့ အကြိတ်အနယ် ဆွေးနွေးကြပါတယ်..။ဒီလို ဆွေးနွေးရင်းနဲ့  ဖွဲ့ ရေးနဲ့  မဖွဲ့ရေး ဆိုပြီး အယူအဆနှစ်မျိုး ကွဲလာတယ်..။
ဒီ အစည်းအဝေးမှာ သဘာပတိအဖြစ် ဦးသန်းထွန်းကိုတင်ထားပါတယ်..။ဒီမိုကရေစီ သဘောအရမိမိ အယူအဆကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆွေးနွေးပါ..။ညှိ ရရင် ညှိမယ်..။ညှိမရရင်လဲ နောက်ဆုံး မဲခွဲတာပေါ့လို့ပြောပါတယ်..။ဒီတော့ မဲခွဲတယ် ဆိုရင်စိတ်ဝမ်းကွဲနိုင်တယ်..။စည်းရုံးရေးကို ထိခိုက်နိုင် တယ်..ဆိုတဲ့အယူအဆတရပ် ပေါ်လာပြန်တယ်..။ကျနော်ကတော့ ဒါကို ဒီမိုကရေစီ လေ့ကျင့်မှုတရပ်လို့ ယူဆပါတယ်..။ကျနော်တို့ ကျောင်းသားတုံးကလဲ ဒီလိုပဲ အကြိတ်အနယ် ဆွေးနွေးကြ..။ငြင်းခုံကြတာတွေ ရှိတယ်..။မဲခွဲလို့ဖြစ်စေ..။ကြားအဖြေတခုခု ရလို့ ဖြစ်စေ..။ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့လဲအေးအေးဆေးဆေးပါဘဲ..။ကျနော်တို့လူကြီးတွေမှာ အတွေ့ အကြုံ ရှိပါတယ်..။ဒါပေမယ့် ဒီလိုဆွေးနွေး ခြင်းခုံတာကို အတွေ့ အကြုံ မရှိတဲ့ လူငယ်တချို့ က ပဋိပက္ခဖြစ်မှာကို စိုးရိမ်ကြပါတယ်..။
အတွေ့ အကြုံ ရှိပါတယ်..ဆိုတဲ့ကျနော်တောင် ဆွေးနွေးရင်းဦးဖေမြင့် အပေါ် သံသယ ရှိလာပါတယ်အာဇာနည်နေ့ အတွေ့ အကြုံ အရများ ခံစားချက် နဲ့ ဆွေးနွေးနေသလားလို့ပါ..။အာဇာနည်နေ့က ဦးဖေမြင့်ကပန်းခွေလုပ်ပြီး ရေချိုး နေလို့ ချီတက်ရာမှာ မပါရတာကို မကြေမနပ် ဖြစ်ခဲ့သူပါ..။ဒါပေမယ့် ကျနော်က အားလုံးကို ပြောပါတယ်..။တကယ်လို့ နောက်ဆုံးမှာ မဲခွဲ ဆုံးဖြတ်ကြရရင်လဲ မဲရှုံးတဲ့ ဘက်က အရှုံးကိုလက်ခံပြီး နိုင်တဲ့ ဘက်က အယူအဆအတိုင်း လိုက်နာရမယ်..။ငါ့ အယူအဆမနိုင်လို့  ငါမလုပ်တော့ဘူးဆိုတာမျိုး မဖြစ်စေရဘူး..လို့  ရှင်းပြရ ပါတယ်..။ နောက်ဆုံးတော့ မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရမယ့် အနေအထားကိုပဲရောက်လာပါတယ်..။ဒီ အချိန်မှာ ကနော်က အဆိုတခုတင်ပါတယ်..။မဲခွဲတာကိုနောက်တနေ့ ရွှေ့ ပေးဖို့ပါ..။
ဒီ အစည်းအဝေးမှာ နှစ်ဘက်ဆွေးနွေး ကြတာကို ခုတည သွေးအေးအေး နဲ့ စဉ်းစားပြီး မနက်ဖန်မှ မဲပေးကြဖို့ .။သွေးပူတုံး မဲမခွဲဖို့ပါ..။ဒီ အဆိုကိုတော့ အားလုံးက သဘောတူပါတယ်..။
နောက်တနေ့  မတိုင်ခင် မိမိဖါသာ အပြင်မှာ ထပ်ဆွေးနွေးချင်ဆွေးနွေး ..။စည်းရုံးချင်..စည်းရုံး။နောက်တနေ့  အစည်းအဝေးမှာလဲ ဒိနေ့ တက်တဲ့(၁၆)ဦး အပြင် ထပ် တက်မဲ့ ကော်မတီဝင် ရှိလာရင်လဲသဘာပတိက ရှင်းပြပြီး မဲခွဲဖို့ သဘာပတိကလွဲလို့ တခြားသူများကတော့
နောက်တနေ့  အစည်းအဝေးမှာထပ်မဆွေးနွေး ဖို့ ဆုံးဖြတ် ပါတယ်..။နောက်တနေ့  အစည်းအဝေး အတွက်လုပ်ငန်း လမ်းညွှန် သဘော
ပေါ့..။နောက်တနေ့ မှာတော့ ကော်မတီဝင် ၁၆ဦး အပြင်ထပ်မလာပါ...။ဒါကြောင့် သဘာပတိက မဲခွဲ ဖို့လုပ်တော့ ဦးဖေမြင့်က သူ့စာတမ်းကို ထပ်မံရှင်းလင်းပြန်ပါတယ်..။ဒါကိုတော့ ကျနော်က တားပါတယ်..။
မနေ့က သဘောတူပြီးသား အတိုင်းပဲ သဘာပတိက ဆောင်ရွက်ပါ..။ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာ လွတ်လပ်ခွင့် ရှိတယ်ဆိုပေမယ့် စည်းကမ်းတော့ ရှိရပါတယ် လို့ ပြောရပါတယ်..။ဦးဖေမြင့် ကလည်း ထပ်ပြီး တင်ပြပြန်ပါတယ်..။ဆရာကြီးက သြဇာအား သုံးပြီး အစည်းအဝေးကိုချုပ်ကိုင်နေပါတယ်လို့  စွပ်စွဲပါတော့တယ်..။ဒီတော့မှ သဘောထားက ပွင့်ကျသွားတာပါ..။ကျနော် ဘာမျှမပြောတော့ပါ..။သဘာပတိ ဦးသန်းထွန်းကဦးဖေမြင့်ကို ထပ်မံ မဆွေးနွေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပြီး မဲခွဲပါတယ်..။
ကော်မတီဖွဲ့ စည်းရေး ဘက်က (၆)မဲ...။မဖွဲ့ ရေး ဘက်က(၁၀)မဲ။ကြားနေ မရှိပဲ အစည်းအဝေးပြီးပါတယ်..။ဒါဟာ ဦးအောင်ကြီး အရေးအခင်းတုံးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောသလို.."ညီညွတ်ရေးရဲ့  ဆုံးရှုံးမှု ရယ်လို့  မဟုတ်ပါဘူး..။ဒီမိုကရေစီသဘောတရားရဲ့  အောင်မြင်ခြင်းပဲလို့ဘဲကျမတော့ မှတ်ထားပါတယ်" ဆိုတဲ့အတိုင်းပါဘဲ..။ဒီမိုကရေစီ အလေ့အကျင့် တခု ရတယ်လို့  ပဲကျနော် ယူဆလိုက်ပါတယ်..။ ။
No comments: Labels: အုန်းနုိုင်
သူက The Hot News ဂျာနယ် နဲ့အင်တာဗျူးမှာ "၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကပေးတဲ့ ရပိုင်ခွင့်နဲ့အခွင့်အရေးတွေဟာ တိုင်းရင်းသားတွေပြောနေတဲ့ ဖက်ဒရယ်နဲ့ သိပ်မကွာပါဘူး" လို့ ပြောသွားပါတယ်၊ သူ့စကားအတိအကျက "ဒီကနေ့ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကပေးတဲ့အထဲမှာ ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းဒေသကြီးအသီးသီးမှာ တန်းတူညီတူအခွင့်အရေးအပြည့်အဝရှိတယ်၊ တိုင်းရင်းသားအားလုံး လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်၊ အမျိုးဘာသာအတွက် ကိုယ့်ပြည်နယ်၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ရှိပြီးသားပဲ၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွေက ဥပဒေရေးဆွဲတယ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွေရဲ့ ဥပဒေပြုခွင့်နဲ့အညီ ပေါ်ထွက်လာတဲ့ ဥပဒေတွေကိုလည်း ပြည်နယ်အစိုးရက စီမံတယ်၊ အဲဒီဥပဒေနဲ့ ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကို ရှေ့ရှူပြီး စီမံတာတွေလုပ်တယ်၊ နိုင်ငံတော်က အတည်ပြုပြဋ္ဌန်းထားတဲ့ နိုင်ငံတော်ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပါတဲ့ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ ရပိုင်ခွင့်နဲ့အခွင့်အရေးတွေဆိုတာဟာလည်း ခုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေပြောနေတဲ့ ဖက်ဒရယ်ဆိုတာနဲ့ သိပ်မကွာပါဘူး၊" လို့ပြောခဲ့ပါတယ်၊
အဲဒီလို ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီရဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်လဲဖြစ်၊ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတစ်ယောက်လဲဖြစ်၊ တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ မွန်ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်လဲဖြစ်ပြီး အစိုးရနဲ့ မွန်ပြည်သစ်ပါတီရဲ့ ပြည်နယ်အဆင့်၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ ပါဝင်ဆွေးနွေးနေတဲ့ ဦးအုန်းမြင့်လို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတောင် "၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံမှာ ပါဝင်တဲ့ ပြဋ္ဌန်းချက်တွေဟာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေ တောင်းဆိုနေတဲ့ ဖက်ဒရယ်မူနဲ့ သိပ်မကွာပါဘူး၊ တိုင်းရင်းသားများအတွက် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌန်းခွင့်တွေကို ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံမှာ ပြဋ္ဌန်းထားကြောင်း" ယုံကြည်လက်ခံထားတယ် ဆိုတော့ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီက လွှမ်းမိုးထားတဲ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကနေ ၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်ဆင်ပြီး တိုင်ရင်းသားလူမျိုးစုများရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆီးလို့ ပြည်တွင်းစစ်ရပ်စဲရေး၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးပါဝင်ဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်ဆိုတာ မျှော်လင့်ချက် အခိုင်အမာမထားရဲပါ၊
အခြေခံမူများ၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံရဲ့ အခြေခံမူများအခန်း၊ ပုဒ်မ ၈ မှာ " နိုင်ငံတော်ကို ပြည်ထောင်စုစနစ်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်သည်" ဟု ပြဌန်းထားပါတယ်၊ ပုဒ်မ ၉ (က) မှာ ရှိရင်းစွဲ တိုင်း ၇ တိုင်းကို တိုင်းဒေသကြီးများအဖြစ်၊ ရှိရင်းစွဲ ပြည်နယ် ၇ ခုကို ပြည်နယ်များအဖြစ် ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပြီး တိုင်းဒေသကြီး ၇ ခု နှင့် ပြည်နယ် ၇ ခုဟာ အဆင့်အတန်းတူညီကြသည်လို့ ပြဋ္ဌန်းထားပါတယ်၊ တကယ်တော့ ဒီပုဒ်မ ၉ (က) ပြဋ္ဌန်းချက်ဟာ ရှေ့က ပုဒ်မ ၈ နဲ့ ကွဲလွဲနေပါတယ်၊ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နဲ့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များလက်မှတ်ထိုးချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ ပင်လုံစာချုပ်အရ တိုင်းရင်းသားများဟာ ပြည်ထောင်စုစနစ်နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ပြည်ထောင်စုသမ္မမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာ တန်းတူရည်တူ ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်ကြတာပါ၊ ၁၉၄၇ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာလဲ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ကရင်နီပြည်နယ်များကို ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး နောက်ထပ်တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်များဖွဲ့စည်းပြီး ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်စုစည်းဖို့ လမ်းဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ၇ ခုဟာ ဗမာတိုင်းရင်းသားအများစုနေထိုင်ရာ ပြည်မဒေသဖြစ်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့် မြန်မာပြည်မက တိုင်းဒေသကြီး ၇ ခုကို တိုင်းရင်းသား ပြည်နယ် ၇ ခုနဲ့ အဆင့်အတန်းတူတယ်လို့ သတ်မှတ်ထားတာဟာ ပြည်နယ်များရဲ့ ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်အဆင့်အတန်းကို နှိမ့်ချလိုက်သလို ဖြစ်နေပါတယ်၊
ဥပဒေပြုရေး၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၂ (ခ) အရ ဥပဒေပြုအာဏာပိုင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကို လူဦးရေ (သို့မဟုတ်) မြို့နယ်ကိုအခြေခံပြီး ရွေးကောက်တင်မြှောက်တဲ့ လွှတ်တော် (ပြည်သူ့လွှတ်တော်) နဲ့ တိုင်းဒေသကြီးများနှင့် ပြည်နယ်များမှ ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ တူညီစွာရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့် လွှတ်တော် (အမျိုးသားလွှတ်တော်) တို့ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းကြောင်းပြဋ္ဌန်းထားပါတယ်၊ ဒီပြဋ္ဌန်းချက်အရ တိုင်းဒေသကြီးများဟာလဲ ပြည်နယ်များနဲ့ တန်းတူ တူညီတဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးရေကို ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရပါတယ်၊ ပုဒ်မ ၁၄၁ အရ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကို ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ အများဆုံး၂၂၄ ဦးဖြင့်ဖွဲ့စည်းရမှာ ဖြစ်ပြီး တိုင်းဒေသကြီး ၇ ခု နဲ့ ပြည်နယ် ၇ ခုက ၁၂ဦးစီ ရွေးကောက်တင်မြှောက်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ် ၁၆၈ ဦးနဲ့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က အမည်စာရင်းတင်သွင်းတဲ့ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် ၅၆ဦး တို့ပါဝင်ကြပါတယ်၊ ဒီဖွဲ့စည်းမှုကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာ ဗမာတိုင်းရင်းသားအများစုနေထိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး ၇ခုက ဗမာတိုင်းရင်းသားအများစုဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၈၄ ဦးရှိနေပြီး ကျန် ကချင်၊ ကရင်၊ ကရင်နီ (ကယား)၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ချင်း စတဲ့ တိုင်းရင်းသားများက အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁၂ဦးစီသာ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခွင့်ရှိပါတယ်၊ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် ၅၆ယောက်မှာလဲ အများစုက ဗမာလူမျိုးများပဲ ဖြစ်တာမို့ လူမျိုးစုလွှတ်တော် (သို့မဟုတ်) အထက်လွှတ်တော်မှာ ဗမာတိုင်းရင်းသားကိုယ်စားပြု ကိုယ်စားလှယ်က ၁၄၀နီးပါးရှိပြီး ကျန်တိုင်းရင်းသား လူမျိုး ၇ ခုကိုယ်စားလှယ်များထက် အဆပေါင်းများစွာ များပြားနေပါတယ်၊ ဒါ တန်းတူညီမျှမှုမဟုတ်ပါ၊ တဖက်သတ်အနိုင်ကျင့်မှုဖြစ်ပါတယ်၊
ပင်လုံစာချုပ်ကို အခြေခံပြီး ရေးဆွဲပြဋ္ဌန်းတဲ့ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာလဲ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကို လူဦးရေကို အခြေခံတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်နဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများကို အခြေခံတဲ့ လူမျိုးစုလွှတ်တော်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းပါတယ်၊ လူမျိုးစုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်း ၁၂၅ ယောက်သတ်မှတ်ထားပြီး ရှမ်းပြည်နယ်အတွက်ကိုယ်စားလှယ် ၂၅ ဦး၊ ကချင်ပြည်နယ်အတွက်ကိုယ်စားလှယ် ၁၂ ဦး၊ ချင်းဝိသေသတိုင်းအတွက် ကိုယ်စားလှယ် ၈ဦး၊ ကရင်နီပြည်နယ်အတွက် ကိုယ်စားလှယ် ၃ဦး၊ ကရင်လူမျိုးများအတွက် ကိုယ်စားလှယ် ၂၄ဦး၊ နဲ့ မြန်မာပြည်မအပါအဝင် ကျန်ဒေသများအားလုံး (ရခိုင်၊ မွန်၊ တနင်္သာရီ အပါအဝင်) အတွက် ကိုယ်စားလှယ် ၅၃ဦး ရွေးကောက်တင်မြှောက်ဖို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်၊ တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်များလုံးဝမပါဝင်ပါ၊ ဒီဖွဲ့စည်းမှုကို ကြည့်ရင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဟာ သက်ဆိုင်ရာ ဒေသအကျယ်အဝန်းနဲ့ လူဦးရေအလိုက် သင့်တင်လျောက်ပတ်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေကို ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခွင့်ရှိပြီး ဗမာတိုင်ရင်းသားကိုယ်စားပြုကိုယ်စားလှယ်ဟာလဲ အလွန်အကျွံမများတာတွေ့ရပါတယ်၊ ဒီကနေ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာလဲ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများအားလုံး တန်းတူညီမျှရေးမူနဲ့ ဗမာတိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်များဦးရေကို လျှော့ချပြီး တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်ဦးရေကို တိုးမြှင့်ပေးသင့်ပါတယ်၊
ပြည်နယ်လွှတ်တော်များ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအရ တိုင်းဒေသကြီး ၇ ခုနဲ့ ပြည်နယ် ၇ခုမှာ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်နဲ့ ပြည်နယ်လွှတ်တော်များ ဖွဲ့စည်းပေါ်ပေါက်လာပါတယ်၊ ဒီဆောင်းပါးက တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများအရေးကို ရေးသားတာမို့ ပြည်နယ်ဥပဒေပြုအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ ပြည်နယ်လွှတ်တော်များဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌန်းချက်များကိုပဲ ဝေဘန်သုံးသပ်ပါ့မယ်၊
ပြည်နယ်များ၏ ဥပဒေပြုခွင့်၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဇယား (၂) မှာ ပြည်နယ်လွှတ်တော်များကို အပ်နှင်းထားတဲ့ ဥပဒေပြုခွင့်တွေကို ပြဋ္ဌန်းထားပါတယ်၊ (၁) ဘဏ္ဏာရေးနှင့် စီမံကိန်း (၂) စီးပွါးရေး (၃) စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေး (၄) စွမ်းအင်၊လျှပ်စစ်၊ သတ္တုနှင့် သစ်တော (၅) စက်မှုလက်မှု (၆) ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး (၇) လူမှုရေး နဲ့ (၈) စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုပြီး ကဏ္ဏပေါင်း ၈ ခုခွင့်ပြုထားပါတယ်၊ အဲဒီလို ကဏ္ဏ ၈ခု၊ အကြောင်းအရာပေါင်း ၄၁ ခု ဥပဒေပြုခွင့်ပေးထားပေမည့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်များရဲ့ ဥပဒေပြုခွင့်ဟာ အကန့်အသတ်များအတွင်းမှာသာဖြစ်တာ တွေ့ရပါတယ်၊ စီးပွါးရေးကဏ္ဏမှာ ဆိုရင်" ပြည်ထောင်စုက ပြဋ္ဌန်းသည့် ဥပဒေနှင့်အညီ ပြည်နယ်အတွင်းဆောင်ရွက်သည့် စီးပွါးရေးကိစ္စများ၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကိစ္စများ၊ သမဝါယမကိစ္စများ" လို့ ခွင့်ပြုထားတော့ ပြည်နယ်အနေနဲ့ ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုခွင့်မရှိပဲ ပြည်ထောင်စုအစိုးရက ပြည်နယ်အတွင်းဆောင်ရွက်မည့် စီးပွါးရေး၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး နဲ့ သမဝါယမကိစ္စများကိုသာ တဆင့်ခံအကောင်အထည်ဖော်ပေးရတဲ့ အဆင့်မှာပဲရှိနေပါတယ်၊ စွမ်းအင်၊လျှပ်စစ်၊ သတ္တုနှင့် သစ်တောကဏ္ဏမှာဆိုရင်လဲ ပြည်နယ်အတွင်းမှာ ရှာဖွေ ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ သတ္တုတူးဖော်ရေး၊ ရေနံနဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်ရေး၊ သစ်ထုတ်လုပ်ရေး၊ ကျောက်မျက်ရတနာနဲ့ မြေပေါ်မြေအောက်သယံဇာတပစ္စည်းများထုတ်ဖော်ရေးအတွက် ဥပဒေပြုခွင့် မပေးထားပါ၊
၈၈ မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့် ကိုကိုကြီးတို့
နယူးယောက်မြို့တော် မြန်မာတိုင်းရင်းသားများနှင့် မေလ ၂၅ စနေနေ့တွင် တွေ့ဆုံမည်
မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၃၊ ဧပြီ ၂၆၊ ၂၀၁၃
မေလ ဒုတိယပတ်မှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ NED အဖွဲ့ကြီးရဲ့ ဖိတ်ကြားချက်အရ လာရောက်ပြီး ၂၀၁၂ တုန်းက ချီးမြှင့်ခံထားရတဲ့ ဒီမိုကရေစီဆုကို လက်ခံကြမယ့် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် မင်းကိုနိုင်နဲ့ ကိုကိုကြီးတို့ကို ဒေသခံ မြန်မာတိုင်းရင်းသားကွန်မြူနီတီအသီးသီးက တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ကြဖို့ ပြင်ဆင်လျက်ရှိပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ ပထမဦးဆုံး မြန်မာတိုင်းရင်းသားမိသားစုများနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို မေလ ၂၅ ရက်၊ စနေနေ့၊ နယူးယောက်မြို့တော်မှာ ကျင်းပရန် စီစဉ်လျက်ရှိကြရာမှာ လောလောဆယ် ကုလရုံးချုပ်ရှိရာ အဆောက်အအုံက ခမ်းမဆောင်တခုမှာ ကွန်မြူနီတီတွေ့ဆုံပွဲဖြစ်မြောက်အောင် ကြိုးစားလျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
တွေ့ဆုံပွဲဖြစ်မြောက်ရေး စီစဉ်သူများအနက် တဦးအပါအ၀င်ဖြစ်တဲ့ ကိုနေတင်မြင့် (347-944-7341) က ပြောကြားရာမှာ နယူးယောက်မြို့တော်နဲ့ အနီးပတ်ဝန်းကျင်က မြို့နယ်တွေက မြန်မာ့အရေးစိတ်ဝင်စားသူတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ၈၈ မျိုးဆက်တွေ၊ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေကို ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပြီး ဖိတ်ခေါ်ထားကြောင်း၊ ရပ်မိရပ်ဖများသဖွယ်ဖြစ်တဲ့ ကဗျာဆရာမောင်စွမ်းရည်နဲ့တကွ စာနယ်ဇင်းသမားများ၊ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များကိုလည်း အကြံဥာဏ်များ တောင်းခံပြီး စီစဉ်လျက် ရှိကြောင်း ပြောပြပါတယ်။
ထိုနည်းတူ မေလ ၂၆မှာ အော်လင်ဒို၊ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်၊ မေလ ၂၇မှာ ဖို့ဝိန်းမြို့၊ အင်ဒီယာနာပြည်နယ်တို့မှာ မြန်မာကွန်မြူနီတီ တွေ့ဆုံပွဲများ အသီးသီး ကျင်းပဖို့ ရှိတဲ့အကြောင်း ဇွန်လ ၁ ရက်မှာ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုဘေးဧရိယာ၊ ဇွန်လ ၂ ရက်နေ့မှာ လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မြို့တော်၊ ၎င်းနောက် ဇွန်လ ၇ ရက်မှာ လပ်စ်ဗေးဂတ်စ်၊ စသည့် မြို့နယ်များက မြန်မာကွန်မြုနီတီပွဲများ ဆောင်ရွက်ကြဖို့ ရှိကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ နယူးယောက်ပြည်နယ်က ယူတီကာမြို့က မြန်မာများနဲ့လည်း ဆုံတွေ့ဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ အဲသည်နောက် အမေရိကန်မှ မထွက်ခွာမီ ၀ါရှင်တန်ဒီစီမြန်မာကွန်မြူနီတီနှင့် ဇွန် ၉ မှာ နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၈၈ မျိုးဆက် ခေါင်းဆောင် ၂ ဦးရဲ့ ခရီးစဉ်မှာ ၎င်းတို့နဲ့အတူ ၀ါရှင်တန်ဒီစီက မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားသူ၊ ကိုအောင်ဒင်က လိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၈၈ အရေးတော်ပုံကာလ၊ ဗကသလို့ ခေါ်ကြတဲ့ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်မှာ ကိုမင်းကိုနိုင်က ဥက္ကဌအဖြစ် ဆောာင်ရွက်ခဲ့စဉ်က ဒုဥက္ကဌ ၂ ဦးအဖြစ် ကိုကိုကြီး နဲ့ အောင်ဒင်က အတူတူ တာဝန်ယူခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခု အနှစ် ၂၄ နှစ်ကျော်မှာ သူတို့ ၃ ဦး အတူတူ ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုမင်းကိုနိုင်ကတော့ ၈၈ အရေးတော်ပုံကာလက စလို့ လက်တွဲခဲ့ကြတဲ့၊ ကွဲကွာခဲ့ကြတဲ့ ရဲဘော်မိတ်ဆွေတွေ ပြန်တွေ့ကြမယ်၊ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြမယ်လို့ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာပြောပါတယ်။ မျိုးဆက်သစ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံ မိတ်ဆက်ရ၊ အတွေ့အကြုံတွေ အမြင်တွေ ဝေမျှခွင့်ရမယ်လို့လည်း မျှော်လင့်လျက်ရှိပါတယ်။ ကိုကိုကြီးကတော့ ဒီမိုကရေစီအရေး အပြောင်းအလဲအတွက် ပြည်တွင်း ပြည်ပက အင်အားတွေ ဘက်ပေါင်းစုံကနေ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကိုမောင်မောင်ကြီး ( ၁၉၆၃ - ၂၀၁၃ ) ကိုယ်ရေးအတ္ထုပတ္တိ
No comments: Labels: Maung Maung Gyi, Memories, Obituary
အောက်စ်ဘုခ်မြို့ဟာ ပါရီ-မြူးနစ် အမြန်မီးရထားလမ်းမပေါ် မြူးနစ်မြို့မရောက်ခင် မိုင် ၄၀ ခန့်မှာ တည်ရှိပါတယ်၊ မိုင်ပေါင်း ၅၀၀ ခန့်ဝေးကွာသော ဒီခရီးကို ဒီတခါစီးဖြစ်တာက ပြင်သစ်အမြန်ရထား TGV ဘဲဖြစ်ပါတယ်၊ နှစ်လလောက်အလိုက ကြိုတင်လက်မှတ် ဝယ်ယူထားလို့ ယူရို ၅၀ ဗမာငွေ ငါးသောင်းခန့်သာ ပေးရပါတယ်၊ အရေးတကြီးမသွားမဖြစ် နီးမှကပ်ပြီးဝယ်မယ်ဆိုရင် ယူရိုငွေ ၁၅၀ အထက်ဈေးပေါက်ပါတယ်၊ ပါရီ-မြူးနစ် အမြန်ရထားလမ်းမကြီးပေါ်မှာ တည်ရှိတဲ့မြို့ အမည်များက ရိုင်းမြစ်ကမ်းပေါ်က ပြင်သစ်ဂျာမန် နယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့ စထရပ်ဘူး Strasbourg၊ ဂျာမဏီ မြို့ကြီးများ ဖြစ်ကြတဲ့ Karlsruhe,Stuttgart,Ulm,Augsburg တို့ဘဲဖြစ်ကြပါတယ်၊ တီဂျီဗွီရထားဟာ မိုင်ပေါင်း ၃၀၀ နီးပါးရှိတဲ့ ပြင်သစ်ဘက်အခြမ်းမှာ အမြန်ရထားလမ်းသစ်ကြီး LGV L'est Européenne စီမံကိန်း တစိတ်တပိုင်း ပြီးစီးသွားခဲ့လို့ တနာရီကို ကီလိုမီတာ ၃၂၀ မိုင်နဲ့ဆိုရင် ၂၀၀ နှုန်းလောက် အထိတင်ပြီး မောင်းပါတယ်၊ ဂျာမဏီဘက်အခြမ်း အရောက်မှာတော့ တနာရီကို ကီလိုမီတာ ၂၀၀ ကျော် ၂၅၀ လောက်သာ မောင်းပါတော့တယ်၊ အမြန်ရထားလမ်း ဖောက်လုပ်ထားတဲ့ စနစ်တွေမှာ ဂျာမဏီနဲ့ ပြင်သစ် မတူညီတာကတော့ ပြင်သစ် High-speed rail လမ်းက အမြန်ရထားတွေသာ သီးသန့်သွားတဲ့လမ်းဖြစ်ပြီးတော့ ဂျာမဏီကတော့ ဒေသအတွင်းသွားတဲ့ ရိုးရိုးရထားတွေပါ ဒီအမြန် ရထားလမ်းတွေပေါ်မှာ ရောပြီးမောင်းကြတာပါ၊ အဲဒါကြောင့် ဂျာမဏီဘက်ရောက်ရင် ရထားက အရှိန်လျှော့ပြီး မောင်းနေရတာပါ၊ ဂျာမဏီရဲ့မြို့တွေကလည်း တမြို့နဲ့တမြို့ ပိုပြီးနီးကပ်ပါတယ်၊ သီးသန့်အမြန်လမ်းဖောက်ဖို့ စီမံကိန်းတွေက ရှိတော့ရှိနေပါပြီ၊ ဘယ်တော့ပြီးမလည်းတော့ မသိပါ၊ ပြင်သစ်မြေ ပါရီအရှေ့ခြမ်းဒေသမှာတော့ အမြန်လမ်း ကီလိုမီတာ ၁၃၀၀ ကျော် ဖောက်လုပ် ပြီးစီး နေပါပြီ၊ ပါရီ မြူးနစ်ခရီးကတော့ စုစုပေါင်း ၆ နာရီကြာ မောင်းရတဲ့ခရီးပါ၊ ဒီလောက် အမြန်နှုန်း တင်ပြီးမောင်းနိုင်တဲ့ ကမ္ဘာကျော် ပြင်သစ်အမြန်ရထားကြီးရဲ့ ချို့ယွင်းချက်တခုကတော့ အိမ်သာ အခန်းထဲမှာ အိမ်သာသုံးစက္ကူ ပြတ်လပ်သွားခြင်းပါဘဲ၊ အထက်ပိုင်းက တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ ညံ့ဖျင်း မှုကြောင့်လား အလုပ်လုပ်သူတွေရဲ့ ပေ့ါလျှော့မှုကြောင့်လားတော့မသိပါ၊ သေခြာတာတခုကတော့ စီးပွားရေး ကျပ်တည်းလာမှုတွေနဲ့အတူ အခြေခံအလုပ်သမားတွေရဲ့ အရာရာမှာ မကျေနပ်မှုတွေ တိုးပွားလာနေပြီး အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာမှာ ခိုကပ်လာတဲ့သူတွေ များလာတာ ဆိုတာပါဘဲ၊
Die Fuggerei ဖူဃရိုန်း The world's oldest social housing complex still in use.
၁၄၅၉ ခုမှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ အောက်ဇ်ဘုခ်မြို့သား သတ္ထုတွင်းလုပ်ငန်းရှင် ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင် Jakob Fugger ဟာ ၁၅ ရာစုနှောင်းပိုင်းမှာ ဥရောပတလွှား ထင်ရှားခဲ့တဲ့ သူဌေးကြီးတဦးဖြစ်ပါတယ်၊ အဲဒီ အချိန်က သူဟာချမ်းသာလွန်းလို့ သူ့အမည်ကိုတောင်မှ Jakob Fugger the Rich လို့ခေါ်တွင်ခဲ့ပါ တယ်တဲ့၊ Jakob Fugger ရဲ့ငွေးကြေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေဟာ ဥရောပငွေကြေးလုပ်ငန်းတွေမှာ အီတလီ ဖလောရင်မြို့က Famiglia de' Medici ခေတ်ပြီးရင် Fugger ခေတ်ဆိုပြီး ဦးစီးဦးဆောင် နေရာမှာ ရှိခဲ့တာပါ၊ Jakob Fugger ဟာ Upper Hungaria ခေါ်ယနေ့ Slovakia စလိုဗာကီးယား နယ်မြေကထွက်ရှိတဲ့ ကြေးနီတွေကို သြစတြီးယား ဂျာမဏီတင်မက နယ်သာလန် ဘယ်လ်ဂျီယံ ကနေ စပိန် ပေါ်တူဂီ အီတလီ နောက်ပြီး အိန္ဒိယထိတိုင် တင်ပို့ရောင်းချရင်း ပိုမိုကြီးပွား ချမ်းသာ လာသူလည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့၊ Die Fuggerei ဆိုတာကတော့ ၁၅၁၆ ခုနှစ်မှာ သူကိုယ်တိုင် စတင် ဦးစီးတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ရှေးအကျဆုံး လူမှုဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းနဲ့ ကယ်ဆယ်ရေး အိမ်ယာစခန်း ဖြစ်ပြီး ယခုထက်ထိတိုင်အောင် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေဆဲလုပ်ငန်း ဖြစ်ပါတယ်၊ သူဟာ သူပိုင်ဆိုင် တဲ့ ငွေတွေနဲ့ သူရဲ့အကောင်းဆုံးသော လူမှုရေး လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ ဖူဃရိုန်းခေါ် လူမှုအိမ်ယာစခန်းကို တည်ထောင်ခဲ့တာပါ၊ ယနေ့ကာလမှာတိုင် အဲဒီအိမ်ယာမှာ နေထိုင်နေသူတွေဟာ တနှစ်နေထိုင်ခ တယူရိုတောင် မပြည့်တဲ့ ၈၈ ဆင့်သာ ပေးရပါတယ်တဲ့၊ လုံးချင်းအိမ်ကလေးပေါင်း ၆၇ လုံးမှာရှိတဲ့ အိမ်ခန်းပေါင်း ၁၄၀ မှာ နေထိုင်သူပေါင်း ၁၅၀ ကျော်လောက် ရှိပါတယ်တဲ့၊ ဘယ်လို စာရွက် စာတမ်းတွေပြပြီး ဘယ်လိုနေထိုင်ခွင့်ရကြသလဲ ဆိုတာကတော့ အထူးက်ိုစိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်း လှပါတယ်၊ အဲဒီလောက်ထိ အသေးစိတ်ကိုတော့ မောင်ရင်ငတေလည်း မစုံစမ်းမသိရှိနိုင်ကြောင်းပါ ခင်ဗျာ၊ သိရှိမည်ဆိုပါကလည်း အဲဒီ ဖူဃရိုန်း အိမ်ယာစခန်းမှာ အသက်ရွယ် အိုမင်းမစွမ်းရှိလာရင် နေထိုင်လိုကြောင်း လျှောက်ထားပြီးနောက် ဘယ်လောက် အချိန်ကာလတိုင်အောင် စောင့်ဆိုင်း ရမယ် ဆိုတာကိုလည်း မခန့်မှန်းနိုင်ကြောင်းပါ၊